Igumbi lokulala elihle eliphindwe kabini
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguBrenda
Ikhaya elithandekayo kwindawo ezolileyo ngaphandle kwe-Ennis Road. Imizuzu eli-15 yokuhamba ukuya kumbindi wesixeko, izikhululo zeebhasi kunye nezikhululo zikaloliwe ukuhamba imizuzu engama-20, zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi zasekhaya kunye neendawo ezintle zokutya nomculo kunye nebala lombhoxo laseThomond Park zonke zingumgama wokuhamba. Imizuzu engama-20 yokuqhuba ukuya kwisikhululo seenqwelomoya iShannon, imizuzu emi-2 yokuqhuba itonela yeendlela eziya eDublin, eClare naseKerry, indawo efanelekileyo kakhulu. Indawo yokupaka yasimahla kwisiza.
Ukulungeleka kumbindi wesixeko kunye nezinto ezikhangayo zabakhenkethi, yonke into ehamba umgama, iNqaba kaKumkani kaYohane, iMyuziyam yaseHunt, iMyuziyam yesiXeko, iMarike yobisi edumileyo. Iindawo zokutyela, iivenkile kunye nee-pubs ezidlamkileyo.
4.89 ·Izimvo eziyi-200
4.89 out of 5 stars from 200 reviews
4.89 · Izimvo eziyi-200
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi200
Ubumelwane bujolise kusapho, kuthe cwaka kakhulu kwaye akukho traffic. Ifikeleleka kumbindi wesixeko kodwa ineevenkile zalapha ekhaya, ii-pubs, iindawo zokutyela kunye neelayisensi eziphumayo- wonke umgama wokuhamba.
Ndiyavuya ukunceda iindwendwe ngolwazi malunga nembali yasekhaya, izinto eziluncedo, iindawo zokutyela, iindawo zentselo kunye nezinto ezinomtsalane kubakhenkethi kwingingqi yaseMid-West.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Limerick